फिचर | Everest Times UK | Page 3
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वमा सरकार गठनको छ महिना बित्न नपाउँदैदेखि सरकार परिवर्तनको व्यापक हल्ला चलेकै हो । मन्त्री फेरिने हल्लाले अब कसैलाई पनि पत्यार लाग्न छाडिस...	Read more
सीको २१ घण्टे नेपाल भ्रमण : उपलब्धि के ?
काठमाडौं । शनिबार अपराह्न दुई दिने राजकीय भ्रमणका क्रममा नेपाल आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ आइतबार फर्किएका छन् । दुई दिने भ्रमणका क्रममा शनिबार अपराह्न ४ः४४ मा सी सवार चाइना एयरको विमा...	Read more
सशस्त्र प्रहरीमा महिला आकर्षण
काठमाडौं । ‘शान्ति, सुरक्षा, प्रतिवद्धता’ मूलमन्त्रका साथ अघि बढेको सशस्त्र प्रहरी बलमा ३७ हजार जतिको दरबन्दी छ । ती दरबन्दीमा महिलाको संख्या न्यून नै छ । तर, विगतको तुलनामा सशस्त्र प्रहरी ब...	Read more
जनयुद्ध सुरु गर्ने नेताहरु के गर्दैछन् ?
काठमाडौं । अहिले जनयुद्ध पनि छैन । जनयुद्ध सुरु गर्ने नेकपा (माओवादी) पनि अस्तित्वमा छैन । जनयुद्ध सुरु गर्ने नेकपा (माओवादी)को मुल हिस्सा तत्कालीन नेकपा (एमाले)सँग एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्...	Read more
कसरी बन्यो नेपाल प्रहरी प्रशंसायोग्य ?
काठमाडौं । तीन दिनअघि ३०, ३२ वर्ष प्रहरी सेवा गरेर निवृत्त भएका आइजीपीदेखि अधिकृतहरुले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सवेन्द्र खनाललाई भेटे । खनाल नेतृत्वको प्रहरीको काम कारवाहीबारे उनीहरुले मुक...	Read more
विप्लवविरुद्ध प्रहरीको यस्तो एक्सन
काठमाडौं । वार्ताका लागि तयारी रहेको सन्देश पठाइरहेका बेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (विप्लव समूह)का नेता माइला लामा काठमाडौंमा पक्राउ परे । उनी पक्राउ गरेपछि विप्लव समूहले एउटा विज्ञप्ति जारी...	Read more